Hagaha Guud ee Dianabol ee Jidh-dhiska
1. Waa maxay Dianabol?
Dianabol (72-63-9) waa mid ka mid ah steroid-anabolic-anabolic leh rikoodh aad u weyn oo ka mid ah ciyaartoyda iyo jir-dhisayaasha adduunka oo dhan. Waxaa si weyn loo isticmaalaa ujeedooyinka jir-dhiska iyo ujeeddooyinka jirka si ay u caan baxaan. Qaar ka mid ah dadka isticmaala waxay tixraacayaan steroidkaan oo ah '' grand-daddy '' ee steroids kale. Tani waa sababta oo ah natiijooyinka waaweyn ee aadka u sarreysa. Waa hoormoon lagu soo dejiyey shaybaarada iyo la xiriirta ragga 'hormoonka caadiga ah ee hormoonada' testosterone. Waxyaabahaan waxaa sidoo kale loo yaqaannaa isku midka kale sida Metanabol, Averbol, Vetanabol, Naposin, iyo Dianabol.
2. Sidee u shaqeeyaa Dianabol?
Sababta aasaasiga ah ee CIBA inay u soo baxdo sheygan waxay ahayd inay kor u qaaddo waxqabadka. Xaqiiqda ah inuu yahay stomoid C17 wuxuu u sahlayaa inuu beddelo testosterone isagoo ku daray isku-xirka labajibbaaran ee carbon. Sidaa darteed, steroid waxay awood u leedahay inay sii dheeraato ka dib markii maamulka. Heerka daroogada ee Dianabol waxay u dhaxeysaa 40 iyo 60. Heerkani wuxuu ka hooseeyaa heerka qiimeynta testosterone kaas oo u dhaxeeya 100. Dianabol, si kastaba ha ahaatee, waxay leedahay saameyn xoogan marka ay timaado protein-synthesis iyo sidoo kale ilaysiga nitrogen. Tani waxay kor u qaadaysaa dayactirka iyo dhisidda muruqyada si deg deg ah u saamaxaysa isticmaalayaasha si ay u xaqiijiyaan natiijo muuqaal ah ka dib wakhti gaaban isticmaalka.
Dianabol (72-63-9) sidoo kale wuxuu leeyahay dabeecad sumad u ah oo sidaas awgeed waxaa loo isticmaali karaa steroids kale si loo hagaajiyo natiijooyinka jimicsiga. Si aad u sii wanaajiso waxtarnimada alaabtaan, waxaad xakameyn kartaa.
3. Dianabol wuxuu isticmaalaa
Dianabol (72-63-9) sida steroid anabolic waxaa lagu gartaa awoodda lagu wanaajinayo habka loo yaqaan "synthesis protein" iyo sidoo kale in lagu caawiyo in lagu buufiyo astaamaha ammaaka ee muruqyada. Waxay ka ciyaareysaa kaalin weyn oo ku jirta ilaalinta aashitada amino-ga ee horeyba u jirey muruqa. Labada ka mid ah guryahaas waxay kordhiyaan qiyaasta borotiinka ee muruqyada. Natiijadu, natiijadu waxay ka caawisaa sameynta muruqyada adag. Iyadoo loo marayo qaybta firfircoon ee badeecadani, muruqyada waxay awoodaan in ay qaataan astaamiyo badan oo badan oo u adeegsanaya dhajinta borotiinka si ay u dhisaan muruqyo badan.
Iyada oo ay sabab u tahay prohormones iyo xeryahooda xooggan ee anabolic ee laga helay badeecadaan, waxay u muuqataa mid ka mid ah waxyaabaha ugu xoogga badan ee jirka dhismaha ee suuqa. Tani waa sababta oo ah xeryahaani waxay awood u siinayaan in badeecadu noqoto mid waxtar leh oo muddo dheer socota. Jidh-dhisayaasha waxay u adeegsan karaan badeecadan muddo dheer. Tani waa sababta oo ah wareegyada dheer ee alaabtan ay keeneyso natiijooyin wax ku ool ah oo wax ku ool ah. Tani waxay siinaysaa jirdhisleyda muruqyada adag iyo kuwa adag sidii ay uga hortagi lahaayeen muruqyada isku dhafan oo ay soo saaraan by andsensens. Methenolone Enanthate vs Methenolone Acetate - Dabeecadda ugu fiican ee loo yaqaan steroids
Dianabol waxaa sidoo kale loo isticmaalaa daaweynta cudurrada noocaas ah sida arthritis, neefta, iyo kansarka naasaha dhexdooda. Dhakhaatiirtu waxay sidoo kale u adeegsan karaan steroid anabolic ee daaweynta nabarrada iyo dhaawacyada jirka. Sidoo kale waxay daweyn karaan bukaannada qaba xaalado qaddar caadi ah oo dabadheer sida xanuun iyo gubasho. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa daaweynta cuuryeerka qanjirada. Waxaa intaa dheer, waxaa loo adeegsadaa kulammada kiimiko ee loogu talagalay bukaanka qaba kansarka.
Marka laga reebo jirka dhismaha iyo cayaartoyda, Dianabol waa mid aad u caan ah dadka u socda jimicsiga jirdhiska. Dad badan oo ka mid ah muwaadiniinta caadiga ah waxay kaloo isticmaalaan Dianabol ujeedooyin qurux badan. Qaar ka mid ah tirokoobyada ayaa muujinaya in isticmaalka steroidkaan ay celcelis ahaan dadka ka baxaan kuwa cayaaraha iyo kuwa jidhka.
Dadka la il-daran ka soo jeeda hypogonadism ayaa sidoo kale lagu daaweyn karaa iyadoo la isticmaalayo steroidskan. Hypogonadism waa xaalad ay raggu ku dhacaan heerarka hoose ee testosterone.
Sababtoo ah steroidkani waxay kordhisaa cadaadiska dhiigga, dhakhaatiirtu waxay u adeegsan karaan inay daaweeyaan xaaladaha dhiig yari.
4. Qiyaasta Dianabol
Sida hore loo sheegay, maamulka hoose ee Dianabol waa qaab kiniin ah. Kiniiniyadu caadi ahaan waa 20-25 mg. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira jirro laysku duro ee steroidkan. Steroid waxaa lagu gartaa nolol yar oo gaaban. Tani waxay ka dhigan tahay in xajintiisa ay hoos u dhacdo oo aad adigu kor u qaaddo xannibaadda, waxaad u baahan tahay inaad si fiican u qaadato Qiyaasta Dianabol. Waxaad qaadan kartaa qiyaasta qiyaasta maalin kasta. Qaar ka mid ah xubnaha jidhka ayaa laga yaabaa inay qaataan qiyaasta ka hor intaanay tababarkooda ama tababarkooda sameynin maaddaama ay hagaajinayso fadhiyada tababarka. Habkani waxaa si kastaba ha ahaatee loo isticmaalo jirka jirka ee musiibooyinka sababtoo ah saameynta daawada Dianabol.
Waxaa sidoo kale muhiim ah in la isticmaalo mudada wanaagsan ee qiyaasta Dianabol. Tusaale ahaan, jirka waxaa lagu talin karaa in la qaato qiyaastii qiyaastii hal saac ka hor inta aanad qaadanin shaqeyn. Markaad la shaqeyneyso takhtar, dhakhtarku wuxuu kaa caawin karaa inaad haysato waqtigii ugu haboonaa ee ku xiran xaaladdaada iyo weliba hadafyada aad u baahan tahay si aad u hesho.
Waxaa sidoo kale lagugula talinayaa sawirka Dianabol si uu u hubiyo heerarka steroid ee dhiigooda. Tani waxay ka caawineysaa inay hubiyaan amnigooda iyo caafimaadkooda wanaagsan. Sidaa darteed, waa inaad raacdaa talada dhakhtarkaaga inta aad ka qaadanayso kala-guurka ku habboon ama nasashada hal qiyaas oo kale. Sidoo kale, ka fogow qaadashada khamriga iyo soodhiga marka aad ka hooseyso qiyaasta Dianabol.
Sida steroid afka ah, Dianabol waxay leedahay kala duwanaansho xadidan marka ay timaado qiyaasaha si fiican sida wareegyada Dianabol. Markaad raadinayso inaad gaarto hadafyo gaar ah oo leh steroidkan, waxaa laga yaabaa in lagama maarmaan noqoto inaad qaadato qiyaasta sare ee Dianabol. Tani waa sababta oo ah badeecadu waa mid xoogan oo xoog leh. Markaad maskaxda ku hayso, kuwan soo socda ayaa ah qaar ka mid ah qiyaasaha Dianabol ee aad u baahan tahay in aad taxaddar yeelatid markaad qaadaneyso steroid:
· Qiyaasta Dianabol ee bilowga ah
Haddii aad isticmaalayso Dianabol markii ugu horeysay, qiyaasta lagu taliyey waxay u dhaxeysaa 15mg-30mg maalin walba bilowga. Waxaa lagugula talin lahaa inaad bilowdid inaad qaadato 15mg maalintii oo ah laba-saddex toddobaad ee ugu horeeya kadib marka la kordhiyo 30mg maalin kasta saddexdii toddobaad ee la soo dhaafay.
Qaybinta qiyaasta inta lagu jiro maalinta oo dhan ayaa lagu talin karaa sababtoo ah nolosha Dianabol nuska. Taas macnaheedu waa qaadashada, tusaale ahaan, kala badh qiyaasta qiyaasta subaxa iyo qaadashada kalabar kale galabtii.
· Qiyaasta Dianabol ee dadka isticmaala dhexdhexaadka ah
Ka dib markii ugu horeysay ee wareega toddobaad ee 6 ee qiyaasta Dianabol, waxaad tixgelin kartaa inaad kordhiso qiyaasta qiyaasta dhexdhexaadinta. Qiyaastaas qiyaasta ah, waxaad qaadan kartaa ilaa 30-50mg maalintii. Waa inaad bilowdid inaad qaadato 30mg maalin kasta bilowgii wareeggaaga oo aad horay ugu sii socotaa 50m maalin kasta dhamaadka wareegga.
· Isticmaalka Dianabol ee isticmaalayaasha casriga ah
Dad badan ayaa ku dhajin kara xaddiga 50mg xitaa marka ay gaaraan heerka sare ee qiyaasta Dianabol. Si kastaba ha noqotee, qaar ka mid ah dadka isticmaala ruumaha ayaa laga yaabaa inay kiciyaan qiyaastooda ilaa 75mg maalintii. Waa inaad ogaataa in qiyaasta noocan oo kale ah ay u tahay dadka isticmaala khibradda waayo waxay kordhin kartaa fursadaha saameynta Dianabol.
· Qiyaasta Dianabol ee haweenka
Dumar badan ayaa qaata Dianabol si ay u raadiyaan awoodda iyo quudinta. Hase yeeshee, waxaa jiri kara saameynaha sida isbeddelka codka, korodhka xad dhaafka ah ee timaha iyo finxinta dadka kale. Waxa kale oo ay sababi kartaa wareegyo aan caadi ahayn. Sidaa darteed, dumarka waxaa lagula talinayaa in ay qaataan qiyaasta hoose ee Dianabol si loo yareeyo fursadaha waxyeeladaas. Iyadoo ku xiran xaaladda haweenka iyo ujeeddooyinkooda, qiyaasta iyaga ayaa laga yaabaa inay u dhaxayso 5mg-20mg.
5. Wareegga Dianabol
The Wareegga Dianabol waxaa loo kala saari karaa saddex waji sida qiyaasta. Kuwaas waxaa ka mid ah wareegga bilowga, wareegga dhexe iyo wareegga ugu sarreeya. Ka hor inta aanad galin wareega, waxaa muhiim ah in la fahmo natiijooyinka laga filayo wareegga. Tani waxay inta badan ku xiran tahay hadafkaaga ugu dambeysa ee qaadashada steroid. Sidaa darteed waa muhiim in la hubiyo fiirinta diyaargarowga Dianabol wareega iyo weliba dhererka wareegga. Marka aad dejiso hadafyadaada, waxay noqon doontaa mid sahlan inaad go'aan ka gaarto wareegga ugu fiican ee aad waqti kasta ku siisay.
· Bilawga cusub ee wareegga Dianabol
Inkastoo ay jiraan dad doonaya inay wareegaan Dianabol wareega wareegga bilowga ah, kuwa kale ayaa laga yaabaa inay doortaan inay kor u qaadaan waxtarka iyaga oo ku dhejinaya steroids kale. Markaad xoogga saarto wareegga Dianabol, waxaad u badan tahay inaad natiijooyin ka hesho waqti gaaban marka loo eego marka la xakameynayo dhiirrigeliyeyaasha kale. Si kastaba ha noqotee, joojinta wareegga Dianabol oo kaliya ayaa keeni karta in si dhaqso ah lumiyo muruqyada la helay. Marka uu xakameynayo, waxa laga yaabaa inay qaadato wakhti gaar ah oo lagu gaaro muruqyada horumarinta. Joojinta wareegga wareegsan ayaa sii dheeraatay muruqyada. Kuwa bilawga ah, wareegga cusub ee soo socda ayaa laga yaabaa in lagu dabaqo.
· Dianabol kaliya wareega
Miisaankani wuxuu aad ugu badan yahay kuwa bilowga ah ee aan horay u lahayn khibrad hore oo ku saabsan istaraatiijka. Qiyaasta Dianabol ee wareeggaan waxay u dhaxeysaa 20mg-30mg maalintii. Saacaddani waxay qaadataa inta u dhaxaysa afar ilaa lix toddobaad. Isticmaalayaasha wareeggaan waxay u baahan yihiin inay ilaaliyaan cunto dheellitiran. Qiyaasta waa in si tartiib tartiib ah looga soo bilaabo hooseeya ilaa sare, iyada oo raadin wanaagsan oo natiijooyinka ah. Faa'iidada wareeggan waxay tahay in ay fududahay in la raaco oo uu yeesho natiijooyin dhakhso ah. Sidoo kale way fududahay in la maareeyo natiijooyinka iyo sidoo kale dhibaatooyinka soo raaca.
· Dianabol iyo Baaritaanka Sustanon
Markaad Isticmaalayso Dianabol oo leh Qalabka Sustanon, waxa ugu muhiimsan waa in la hubiyo in wareegga uu yahay mid aad u fudud. Imtixaanka Sustanon wuxuu ku habboon yahay steroid ugu horeysa ee la gooyo Dianabol tan iyo markii uu xakameynayo shaqada Hypothalamus-Pituitary-Test Axis (HPTA).
Wareegga Dbol / Imtixaanka Sustanon wuxuu u eg yahay sidan:
Usbuuca 1-4 Dianabol 20-25mgper maalinta
Usbuuca 1-12 Imtixaanka Sustanon 250-500mg maalintii
Xilligaas ka dib, waa inaad qaadataa toddobaadyada 2-3 si aad u jajabiso ka dib markaad u baahato inaad qaadato daaweynta dambe. Waa inaad qaadataa qiyaasta Nolvadex laba asbuuc oo ah 40mg iyo 20mg maalintiiba laba toddobaad.
Trenbolone waxaa lagu dari karaa Dianabol si loo hagaajiyo saameynta saameynta. Marka loo isticmaalo kaligiis, Dianabol ayaa weli keeni doonta saameynta saameynta. Hase yeeshee, waxaa laga yaabaa inay sababto sii-haynta biyaha sababtoo ah ma uusan jarin dufanka. Tani waxay keeni kartaa saameynaha kale ee muruqyada murqaha sida muruqyada adag ee maskaxda la saaro. Trenbolone waxaa lagu dhejiyey Dianabol si loo hagaajiyo jarida. Qaababka soo socda ayaa laga yaabaa in lagu dabaqo wareegga:
Usbuuca 1-12 Trenbolone 20mg ka dib maalin kasta
Kadib labo toddobaad kadib marka la dhammeeyo wareegga wareegga, daaweynta ka dib isbuuc ka dib 17 waa in lala qaataa qiyaasta Nolvadex ee 20mg / 20mg / 40mg muddo laba toddobaad ah. Marka lagu daro duufaan, Dianabol iyo trenbolone isugeynta natiijada waxay u muuqataa muuqaal jidheed oo cufan.
Deca Durabolin waa mid ka mid ah steroids anabolic oo leh saameyn aad u weyn marka la eego kor u kaca muruqyada. Isticmaalkan steroids wuxuu si joogto ah u shaqeeyaa heerarkiisa si tartiib tartiib ah. Ka dib markaad joojiso Dianabol wareegga wareegga, steroidskaan wuxuu ka caawinayaa horumarkaaga muruqyada. Wareegga Dianabol waxaa lagu xakameynayaa Deca Durabolin, waxaa lagula talinayaa in lagu daro qiyaasta imtixaanka E si loola socdo loona ilaaliyo noocyada kala duwan ee hubinta testosterone. Qaabkan waxaa lagu qaadi karaa qaabka soo socda:
Usbuuca 1-4 Dianabol 20-25mg maalintii
Usbuuca 1-12 Deca Durabolin 200mg maalintii
Usbuuca 1-12 Imtixaanka E 400mg toddobaadkii
Labada nooc ee steroids, marka wadajir loo qaato, waxay kordhin karaan guryaha cagaarshowliyada. Sidaa darteed, waa in si gooni ah loo qaataa si loo abuuro saameynta waxtarka leh ee wareegga. Waxaa lagugula talinayaa inaad ku darto qiyaasta toddobaadlaha ee tijaabada E ee 500 mg toddobaadkii. Qaabkan waxaa loo qaadan karaa sida soo socota:
Usbuuca 1-2 Dianabol 20-25mg maalintii
Usbuuca 1-12 Anvar 50mg maalintii
Usbuuca 1-12 Imtixaanka E 500mg toddobaadkii
Daaweynta ka-dambeeya waa in la sameeyaa inta u dhexeysa 9th iyo 11th toddobaad. Daaweyntani waa in lagu qaado qiyaasta 200mg maalin walba Nolvadex.
· Wareegga dhexe ee Dianabol
Sicirka dhexe ayaa la qaadi karaa markii mid ka mid ah uu lahaa wareeg ah bilowga hore. Wareeggan, mid ayaa laga yaabaa inuu ku darsado waxyaabo badan oo la heli karo natiijooyin wax ku ool ah. Dhexdhexaadin dhexdhexaad ah waxaa laga yaabaa in laga bilaabo 8 illaa 14. Tusaale ahaan wareegga noocan oo kale ah ayaa laga yaabaa inuu qaato Deca Durabolin, Dianabol iyo Capionate tijaabada soo socda:
Usbuuca 1-6 Dianabol 20mg maalintii
Usbuuca 1-12 Deca Durabolin 400mg maalintii
Usbuuca 1-11 Capionate tijaabada 600mg toddobaadkii
· Baaskiilka Dianabol ee ugu sareeya
Sicirada horumarsan ee Dianabol waxaa isticmaali kara dadka isticmaala horumarka si ay u helaan natiijooyin heer sare ah. Socodkan waxaa ku jira noocyo kala duwan oo steroid ah oo loo isticmaali karo xargaha. Si ka duwan kuwa bilowga ah iyo wareegyada dhexdhexaadinta, wareegga ugu sarreeya wuxuu socon karaa ilaa toddobaadyada XNUM. Waxay sidoo kale ku jirtaa qadar sare. Kuwa soo socda waa tusaale tusaale ah wareega Dianabol ee horumarsan:
Usbuuca 1-6 Dianabol 100mg maalintii
Usbuuca 1-10 Trenbolone Propionate 100mg toddobaadkii
Usbuuca 1-10 Deca Durabolin 500mg maalintii
Usbuuca 1-10 Tijaabi Ehelka 1000mg toddobaadkii
Waxyaabaha kale ee dheeraadka ah ee sharciga ah ee loo isticmaali karo wareegga diyaarka ah ee Dianabol waxaa ka mid ah:
Imtixaanka Maxkamada (Test Ethics)
Faa'iidada wareeggan waxay tahay in ay natiijo ka dhalato guulo waaweyn oo lagu sameeyo dhismaha muruqyada. Si kastaba ha noqotee, wareeggaasi wuxuu khatar u yahay dadka qaarkood waxayna u nugul yihiin waxyeelo. Maadaama heerarka sare ee estrogen ee la xariira qiyaasta sare, dadka isticmaala waxaa lagula talin karaa inay qaataan nuucyadaas sida Aromatase Inhibitor.
Wixii midkasta ee wareega Dianabol ee aad soo socotid, waa mid aad u muhiim u ah midkuu ku xiran yahay jadwalka adiga oon qaadin xad-dhaaf. Waxaa sidoo kale muhiim ah in maanka lagu hayo in ay jiraan siyaabo badan oo loo adeegsan karo Dianabol oo kale aan ka ahayn qaababka kor ku xusan.
6. Natiijooyinka Dianabol
Dianabol waa awooda qumman ee steroid ah si ay u siiyaan guulo cajiib ah marka loo qaado habboon. Waxay sidoo kale u baahan tahay daaweynta dambe ee daaweynta. Steroid waxay qaadataa waqti gaaban inta u dhaxeysa saacadaha 1-3 si aad u gasho dhiigga. Taasi waa sababta loogu taliyay in la qaato saacado yar ka hor inta aan la bilaabin. Si loo helo natiijooyin joogto ah oo ah qaabaynta jirka, waxaa lagugula talinayaa in mid ka mid ah uu heysto cunto sax ah iyo jadwal shaqo oo la maamuli karo. Masteron Propionate ama Masteron Enanthate? Midkee ayaa kuu fiican?
Kuwa bilawga ah waxay filan karaan in ay arkaan natiijooyin la ogaan karo sida ugu gaaban ka dib markii usbuuca koowaad ee wareegooda. Waxaa suurtagal ah in la helo 4-7lbs kaddib todobaadkii ugu horreeyay. Tani waxay sidoo kale siin doontaa koror xoog leh. Natiijooyinkani waxay iman karaan wiiga labaad ee qaar ka mid ah dadka isticmaala maaddaama natiijooyinka aysan ku dhicin dhammaanba isticmaalayaasha.
Natiijooyinka waxay u kici karaan 8-12lbs kadib toddobaadkii labaad. Muruqyadaasi waxay leeyihiin miisaan iyo xoog badan marka loo eego natiijooyinka ugu horreeya. Tani waxay sidoo kale hagaajineysaa waxqabadkaada jimicsiga taasoo ka dhalata xoog korodh ah.
Usbuuca afraad ee qiyaasta Dianabol, isbeddel jirka oo weyn ayaa laga filayaa jirkaada. Iyadoo tababarka saxda ah iyo nafaqada saxda ah, waxaad filan kartaa faa'iidada ilaa 15-20lbs. Isticmaalayaasha intooda badan waxay doortaan inay joojiyaan wareegooda waqtigan. Tani waa sababta oo ah khatarta ah ee saameynta daawooyinka ee la xariira qiyaasaha ka baxsan dhibtan.
Dadka sii kordhiya qiyaasta qiyaasta ayaa la filayaa in ay gaaraan natiijooyin aad u cajiib ah. Tusaale ahaan, isbuuca siddeedaad, mid ayaa awood u leh in uu sameeyo jimicsi aad u sareeya oo ku yaal jimicsiga wuxuuna dhamaystiraa sanduuq kasta si guul leh. Dhamaadka toddobaadka, waxaad ku guuleysan kartaa 25-35lbs.
Isticmaalka Dianabol wuxuu dhalin karaa miisaan. Hase yeeshee, xaddiga iyo heerka miisaanka korodhka ayaa saameyn ku yeelan kara arrimahan oo kale sida shaqooyinkaaga, cuntada, awoodda steroids xoog leh iyo da'daada.
Sidaa darted, guys ayaa awood u leh inay isbarbardhigaan Dianabol ka hor iyo ka dib natiijooyinka taasoo muujinaysa natiijooyin aad u cajaa'ib leh. Natiijooyinkan ka hor iyo ka dibba waxaa ka mid noqon kara ragga raga ah ee markii hore ahaa mid maqaayad ah, haddii qofku uu kufsadey ka hor Dianabol, natiijooyinka ka dib waxaa laga yaabaa in uu jirku ku jiro jacked halka kuwa kuwa jirdilay ay heleen tiro sidaas u noqdaan kuwo weyn. Si kastaba ha noqotee, dadka horeyba u aasaasay saldhig ku jira qaab-dhismeedka jirka iyo qaadashada tababarka halista ah waxay u sahlanaan karaan natiijooyinkan si sahlan.
· Dhibaatooyinka dhinaca Dianabol
Sida noocyada kale ee anabolic anabolic, qaabka jirka jirka ee Dianabol waxaa lagu gartaa waxyeello kale. Dhibaatooyinkaan waxaa ku dhici kara inta badan qiyaasta iyo da'da xaaladaha kale. Dhibaatooyinka daawadu waxay noqon karaan mid khafiif ah ama xitaa daran. Waa kuwan qaar ka mid ah saameynaha Dianabol ee aad filan karto markaad qaadato Dianabol:
· Maaraynta saameynta daawada Dianabol
In kasta oo ay jiri karto waxyeelooyinka kor ku xusan ee la xiriira Dianabol, saameyntani waa mid aad loo maamuli karo mana ahan in ay noqoto mid wax lagu turunturo si loo gaaro ujeedooyinkaaga jirka. Waxyaabaha soo socdaa waa qaar ka mid ah siyaabaha looga hortagi karo dhibaatooyinkan:
Qaadashada qiyaaso yar
Sida horay loo arko, inta badan saameynta daawada Dianabol badankeeda waa ay ka dhalatay xaddiga xad-dhaafka ah. Hoos u dhigidda qaadashada qiyaasaha nabdoon wuxuu yareynayaa fursadaha badi saameynta Dianabol.
Adeegsiga Aromatase inhibitor ah
Ilaaliyahaani wuxuu yareeyaa fursadaha Dianabol jebineysa estrogen marka uu jirka galayo. Korriinka estrogen ee jidhka labka ah wuxuu keeni karaa waxyeelo aan loo baahnayn sida kobaca naasaha.
Isticmaalka saxda ah ee steroid
Habka ugu wanaagsan ee loo isticmaalo Dianabol waa soo socda si taxadar leh u tilmaamaya tilmaamaha uu bixiyay takhtarka iyo raacitaanka wareegga si habboon. Tani ma aha oo keliya in la yareeyo saameynta daawada laakiin sidoo kale waxay kordhisaa guulaha Dianabol.
Wareegyada Dianabol waxay sidoo kale keeni kartaa yareynta testosterone ragga qaarkood. Jidhkooda xaaladaha noocaas ah waxay soo saaraan qadar yar oo ah tijaabo. Tan waxaa lagu daaweyn karaa adigoo qaadanaya dheecaan tijaabo ah.
7. Dianabol kala bar nolosha
Nolosha nuska ah ee daroogada ayaa loola jeedaa wakhtiga ay qaadato jirka si uu u nuugo daroogada una baabi'iyo ilaa kala badh qadarkeeda. Dianabol kala bar nolosha waxay u dhexeysaa saacadaha 2-3. Tani waxay ka dhigan tahay in qiyaasta Dianabol lagu qaadi karo qiyaaso yar maalin kasta si loo xaqiijiyo helitaanka dhiigga. Qiyaasahaas waxaa laga yaabaa in la qaato saddex ama afar jeer maalintii. Iyada oo ay ku xiran tahay xaddiga kala duwan ee steroid ee dhiigga, user waa inuu fahamsan yahay nolosha nuska ah si loo isticmaalo wakhtiga qiyaasta habboon
Haddii tusaale ahaan, aad go'aansato inaad qaadato 20mg ee Dianabol afar wiig ah, iyada oo ku fekereysa in uu leeyahay nus nus afar saacadood, kuwan soo socda ayaa noqon doona kala-duwanaanshaha kala duwan ee Dianabol dhiigga:
Qiyaastaas oo kale, qofku wuxuu go'aansan karaa inuu kala qaybiyo qiyaasta afar qaybood hal maalin, sidaas daraadeed wuxuu qaadanayaa qiyaasta 5mg ee saacadaha 4, laga bilaabo 6 AM. Afar saacadood kadib qiyaasta ugu horreysa, (10 AM), xoogsaariddu waxay ku jiri doontaa 2.5mg ee dhiiga. Tani waxay u kici doontaa 7.5mg kadib qiyaasta labaad. Marka la qaato qiyaasta seddexaad, (2 PM) feejignaanta waxay noqon doontaa 3.75mg taas oo mar kale u kici doonta 8.75mg kadib qiyaasta saddexaad. By 6 PM, waxaa jiri doona 4.375mg. Tani waxay u kici doontaa 9.75mg kadib qiyaasta afraad. Taas ka dib, foojignaanta ayaa hoos u dhigi doonta nuska dambe ka dib afar saacadood kasta sida inay noqon doonto 4.875mg by 10 PM, 2.45 by 2 AM ugu danbeyntii 1.2mg by 6 AM HRS marka qiyaasta xigta la qaado. Trenbolone Enanthate vs Trenbolone Acetate (Midkee Wins?)
Nidaamkan oo kale, qofka ayaa awood u leh inuu hubiyo in uu jiro joogto ah steroid ee nidaamka. Taas macnaheedu waa in ay jiraan wax wanaagsan oo ka hor shaqeynta, taas oo markaa ka dib kor u kaca ka dib markii loo qaato qiyaas kale. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jiri doona 4mg of Dianabol nidaamka u dhexeeya qiyaasta ugu dambeysay iyo qiyaasta hore ee maalinta xigta. Dhammaanba tan lama isticmaalin.
Qaab kale, qofku wuxuu go'aansan karaa inuu qaato 20mg of Dianabol at 2 PM ka hor inta uu ka shaqeynaya at 4 PM. Sidaas awgeed bartamaha badhkeed, heerarkiisu waxay ku jiri doonaan 2.5mg, iyo qiyaasta soo socota, steroid ayaa si buuxda looga tirtiri doonaa nidaamka. Qiyaasta qiyaasta, qofku wuxuu leeyahay qiyaasta hoose ee Dianabol maalintiiba marka loo eego qaabka hore.
Labada qaab, waxaa jira dayactir heer sare ah oo ah Dianabol waqtiyada ugu muhiimsan ee isticmaalayaasha maalinta. Tani macnaheedu waa isku-filnaansho ku filan kahor tababarka, inta lagu jiro iyo kadib tababarka.
Inaad haysato aqoon wanaagsan oo ah dianabol kala badh noloshu waa arrin aad muhiim u ah maareynta qiyaastaada iyo sidoo kale waqtiyada ay ku jiraan. Tani waxay ku siinaysaa isticmaalka aad u fiican ee Dianabol si natiijooyin fiican leh.
8. Faa'iidooyinka Dianabol
Kuwa soo socda waa qaar ka mid ah Faa'iidooyinka Dianabol Isku-dubarid dhaqdhaqaaqa jirka ee Dianabol:
Isticmaalka steroid afka ah, dadka isticmaala Dianabol uma baahna in la duro. Tani waxay sidoo kale ka caawisaa dadka isticmaala inay si fudud u maamulaan qadarkooda. Kuwa doonaya cirbadaha, waxaa sidoo kale jira jirro laysku duro ee steroidkan, taasoo ka dhigaysa mid aad ugu habboon doorbidka dadyowga kala duwan.
· Haysashada Nitrogen
Wixii koritaanka murqaha qalfoofka, nitrogen wuxuu ciyaarayaa door aad u muhiim ah. Jirku wuxuu u baahan yahay inuu lahaado qiyaasta ku filan ee nitrogen si loo helo habka dhismaha muruq go'a.
Dianabol waxay sidoo kale kordhisaa habka glycogenesis. Nidaamka glycogenesis wuxuu ka kooban yahay glycogogga sonkorta. Tani waxay kordhisaa heerarka gulukooska ee nidaamka taasoo keentay heerarka tamarta sare ee jirka.
· Kordhinta heerarka testosterone
Marka heerarka testosterone lagu kordhiyo jirka, jidhku wuxuu helayaa faa'iidooyin badan oo la xiriira hormoonkan. Kuwaas waxaa ka mid ah xawaareynta waqtiga raysashada ka dib kalluumeysiga, kor u qaadista xawaaraha galmada iyo kobaca muruqyada dadka kale.
· Daawada Protein
Dianabol waxay sidoo kale kordhisaa qiyaasta jirka ee jirka ku dhisa borotiinka unugyada. Qanjirrada sidoo kale waxay door weyn ka ciyaaraan dhismaha muruqyada tan iyo markii ay u dhaqmaan sida dhismaha naqshadda borotiinka
· Kordhinta wax soo saarka unugyada dhiigga cas
Dianabol waxa kale oo uu hagaajiyaa heerka qiyaasta jirka ee soo saaro unugyada dhiigga cas. Unugyada cas ee gaduudan waxay ka caawiyaan bixinta oksijiinka jirka. Natiijo ahaan, mid ayaa awood u leh in uu weeraro mawduucyada si xeeladaysan oo xoog leh.
· Yaraynta daal
Dianabol wuxuu awood u leeyahay inuu yareeyo daalidda inta lagu jiro shaqooyinka. Tani waxay sabab u tahay heerarka korodhka testosterone ee jirka. Natiijo ahaan, dadka isticmaala waxay awoodaan inay ku tababaraan fadhiyo adag iyo wakhti dheer.
· Horumar weyn ee muruqyada iyo xoogga
Iyadoo Dianabol, waxaa suurtogal ah in bilowga ah ay ku guuleystaan ​​20-30lbs muruqyada adag ee ku jira wareegga toddobaad ee 6-8. Isticmaalayaasha qibrada leh ee steroidkani waxay awood u yeelan karaan inay natiijooyin fiican ka helaan wareegga noocaas ah.
· Wareegyo gaaban
Faa'iido kale oo ah Dianabol waa in ay ku lug leedahay wareegyo gaaban. Inkasta oo inta badan steroids kale ay ku lug leeyihiin wareegyo dheer oo loogu talagalay mid si loo xaqiijiyo natiijooyinka, iyadoo leh Dianabol xayawaanka, wareegyada gaaban ee toddobada toddobaad ee 4-6 waxay keeni kartaa isbedel la taaban karo.
Iyada oo faa'iidooyinka Dianabol, waa mid sahlan in qofku noqdo ilaah ku jira jirdhiska ama jidh-dhisidda oo aan lahayn wax dhib badan. Si aad uga faa'iideysatid faa'idooyinka Dianabol, mid waa inuu taxadaraa marka la eego jadwalka wareegga si looga fogaado isku feejignaanta. Haddii kale, Dianabol waxay kuu xaqiijin kartaa natiijooyin aad u wanaagsan.
9. Dianabol Review
Waxaa jira caddayn ah in Dianabol uu yahay oo uu sii ahaan doono steroids aad u fiican oo ka mid ah jaaliyadaha jirka iyo cayaartoyda. Isticmaalayaasha faraxsan ayaa had iyo jeer doonaya in ay wadaagaan waaya-aragnimadooda iyo qanacsanaanta ay ka helayaan steroidkan Dib u eegista Dianabol. Dib u eegista wanaagsan ee ay bixiyaan halyeeyada, kuwa dhexdhexaadka ah iyo kuwa bilowga ah waxay muujinayaan in steroidkan run ahaantii lagu kalsoon yahay. Waa kuwan qaar ka mid ah dhowr ka mid ah dib u eegista Dianabol ka mid ah dadka isticmaala:
Keith: Keith wuxuu ahaa waqti loogu talagalay isticmaalka stobbing anabolic ilaa saaxiib uu isaga u soo bandhigay storoid Dianabol. Markii uu ahaa nin hoogeeynaya isticmaalka steroids, wuxuu horay u dhisay mawjado fiican oo murqaha ah markii uu soo bandhigay Dianabol.
Markii uu ku dhuftay wejiga dariiqa oo uu la socdo steroids hore, Keith wuxuu raadinayay wax si uu isaga siiyo qaar kale oo dheeri ah muruqiisa. Talooyin badan oo uu ka helay dhakhtarkiisa, Keith wuxuu awooday inuu ku guuleysto himilooyinka dhabta ah ee Dianabol. Keith ilaa hadda maahan waayo wax saameyn ah oo daran iyo ballanqaadyo inuu sii wado isticmaalka Dianabol safarkiisa si uu u dhiso jirka.
Jack: Jack waxaa loo soo bandhigay Dianabol madaxiisa. Sida liiska baaskiilka, inkasta oo uu rabo in uu noqdo mid xoog leh, wuxuu lahaa wax dan u ah jirka jirka. Markii uu madaxiisa u soo jeediyay Dianabol isaga, wuxuu ahaa markii ugu horeysay ee ciso ah. Jack wuxuu aaminsan yahay in steroid loo isticmaalay oo kaliya loogu talagalay ujeedooyinka jirka. Taasi ma uusan aheyn ka dib.
Kadib markii uu dhamaystiray wareeggii ugu horeeyay ee Dianabol, Jack ma uusan haysan wax isbeddel ah oo suuragal ah waxana uu lahaa waxyeelo daran. Wuxuu ku dhawaadaa iska daayay markii uu maamulkiisu ku taliyay inuu la tashado dhakhtarkiisa. Dhaqtarka ayaa ogaaday in Jack uu qaadanayay qadar aad u culus iyo cuntadiisu ma fiicna inuu ku taageero nooca qiyaasta noocan ah. Dhaqtarka ayaa sidoo kale ku jiray Aromatise Inhibitor wareegga xigga.
Jack wuxuu qaatay marxalad kale, waqtigaan waxaa kormeera dhakhtarkiisa iyo kudheerayaasha daaweynta iyo daaweynta post-Cycle. Wuxuu bilaabay inuu helo natiijo wanaagsan toddobaadkii afaraad. Waxa uu awooday inuu tababarkiisa si sahal ah u guto oo uu sidoo kale helay muuqaal caan ah oo jidhkiisa ah. Jack ayaa aad ugu faraxsan natiijooyinkaas oo wuxuu doonayaa inuu sii wado isticmaalka Dianabol tababarkiisa.
Anthony: Ka dib markii uu jabsaday dhabarka dhowr bilood ka hor, Anthony oo ahaa nankee ku yaal qolka jimicsiga ka hor markaasna wuxuu joojiyay inuu tago jimicsiga. Ugu dambeyntiina, wuxuu bilaabay in uu miisaan culus qaato bil kadib illaa iyo inta uu ka horyimid xaaskiisa.
Anthony waa in uu sameeyaa cilmi baaris si loo soo saaro istaraatiijiga ugu wanaagsan ee ka caawin kara inuu dib u soo celiyo gobolkiisii ​​hore waqti gaaban. Ugu dambeyntii wuxuu ogaadey in Dianabol qaboojiyayaashu ay si fiican u shaqeynayeen dad badan. Anthony go'aansaday inuu soo iibsado Dianabol meelo yaryar oo haa! Waxay u shaqaysay isaga.
Toddobaadka dhexdiisa 4 Anthony wuxuu ku haystaa wakhti sahlan xilligiisa, wuxuu horey u bilaabay inuu lumiyo dufanka iyo culeyska. Anthony aad ayuu ugu faraxsan yahay wareeggaan wuxuu sheegayaa inuu si weyn ugu talin lahaa badeecadan.
Frank: Frank kaliya wuu dhammeeyey Toddobaad lixaad leh qiyaasta maalin kasta ee 40mg maalintii. Wuxuu ku faraxsan yahay inuu helo wadar ahaan 12lbs murqaha musqulaha isagoo wareegiisa koowaad ah. Waxa kale oo uu ku faraxsan yahay in saaxiibtiis uu ogaaday tan oo uu ku caan baxay muuqaalkiisa cusub.
Frank wuxuu si taxadar leh u raacay talada tababarkiisa jimicsiga wuxuuna ku sugnaaday raashin aad u weyn intii lagu jiray wareegga wareegga, taas oo uu ku sheegay inuu si weyn ugu guulaystay guulihii weynaa ee uu gaaray. Frank wax saameyn ah kuma laheyn qadarkiisa inkastoo uu shaki ku jiro bilawga qiyaasta Dianabol.
Frank sidoo kale wuxuu ku raaxeeyaa xoog weyn iyo heerarka tamarta sare ee uu ka helay Dianabol isaga oo ka caawinaya inuu sameeyo tababar adag oo socon kara muddo dheer.
10. Dianabol ee iibka
Noqoshada mid ka mid ah steroids ugu caansan ee jirka dhismaha jirka ee jirdhisleyda hoogaamiyaasha iyo kuwa lagu soo bandhigo bulshada jidh-dhiska, Dianabol ee iibka waa mid aad u firfircoon inkastoo inta badan shirkadaha ugu horreeya ay joojiyaan soo saarista sheygan. Wadamo badan, waxaa weli lagu soo saaraa magacyada sida Methabol, Anabol, Naposim, iyo Methadieone. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la ogaado in Dianabol loo qoondeeyay alaab la xakameeyay. Natiijadu, waxay noqon kartaa sharci darro dalalka qaarkood kuwaas oo laga heli karo sheyga sheyga dhulka hoostiisa ama alaabada daroogada.
Darajada daawada Dianabol ee iibka waxaa soo saara shirkado dawooyinka loo yaqaan FDA ee loo yaqaan 'FDA' kaas oo soo saaraha Dianabol iyo bixiyaha Dianabol inay buuxiyaan shuruudaha FDA. Shuruudahaan waxay ku soo noqdaan qiyaasta walxaha cayriinka iyo sidoo kale habka wax soo saarka. Kuwani waxay noqon karaan meelaha ugu wanaagsan ee lagu iibsado Dianabol maadaama badeecada la dhigo tijaabada waxaana loo xakameeyaa sidaas darteed u habboon isticmaalka aadanaha. Waxay sidoo kale yihiin tayo aad u sarreeya, sababtoo ah waxay u damaanad qaadeen daacadnimo iyo daahirnimo. Steroids ayaa sidoo kale lagu iibiyaa qiimo ka sarreeya marka loo eego sheyga dhulka hoostiisa (UGL) Dianabol.
Shaybarka hoose ee Dianabol, dhinaca kale, waxaa soo saaray soo saarayaasha aan idman. Shaybaaradani waxay badanaa ku takhasusaan soo saarista steroids anabolic. Shaybaarada noocan oo kale ah ayaa laga yaabaa inay ku taallid guriga qof, garaash ama dhismaha dhismaha. Faa'iidada la xidhiidha shaybarka dhulka hoostiisa ah ee Dianabol waa in lagu helaa tiro badan oo kharash ka yar qiyaasta daawada steroid ee daawada. Si kastaba ha noqotee, tayada iyo nadiifinta kuwan aan marnaba la hubin. Waxay ku xiran tahay go'aanka shakhsiyaadka si ay u iibsadaan Dianabol ka soo saaraha shirkadda Dianabol ee sharciga ah ama alaab-qeybiyaha ama ka iibsada suuqa madow. Tani waxay ku xiran tahay dhadhanka iyo dookha qofka.
Haddii aad rabto inaad ku iibsato shahaadada dawada ama sheybaarka Dianabol, badeecadaha waxaa guud ahaan lagu iibiyaa qiimo ka yar inta badan noocyada kale ee steroids. Tani waxay ka dhigeysaa mid aad u jecel. Si kastaba ha ahaatee, qiimaha Dianabol ee iibka ma aha mid had iyo jeer isku mid ah. Tani waa sababta oo ah kala duwanaansho ka mid ah arrimahan sida daawada loo isticmaalo kiniin ahaan (tusaale ahaan mg kiniin, 10mg kiniin, 50mg kiniini iwm.), Iyo waxyaabo kale oo badan. Farqiga u dhexeeya qiimaha u dhexeeya UGL Dianabol ee iibka iyo Dianabol-ka Pharmaceutical sidoo kale ma aha mid aad u kacsan.
Ilo kale oo aad ka iibsan kartid Dianabol waa dukaamda internetka. Waxaa jira websiyo badan oo Dianabol laga iibiyo aduunka oo dhan. Waa sahlan tahay inaad iibsato Dianabol online tan iyo markii ay ka sahlan tahay ilaha kale. Markaad go'aansato Soo iibso Dianabol online, had iyo jeer waa muhiim in la hubiyo in aad ka soo iibsato website sharci ah. Waxaad baadhi kartaa si aad u ogaato iibiyeyaasha ugu qaalisan onlineka. Waa inaad sidoo kale akhridaa macaamiisha Dianabol dib u eegista bogagga internetka si aad u ogaatid sida macaamiisha u dareemayaan iyaga. Tani waxay sidoo kale kaa caawineysaa inaad hubiso inaad kaliya iibsato tayada ugu fiican ee steroid ah.
11. Dianabol loogu talagalay jidh-dhiska - Soo koobid
Dianabol ayaa weli ah midka ugu wanaagsan ee ka mid ah steroids loo isticmaalo jimicsiga iyo jirka. Sheyga wuxuu la yimaadaa faa'iidooyin badan marka la eego shaqadiisa iyo habka ay u shaqeyso. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa ujeedooyin kale oo badan oo caafimaad marka laga reebo jirka jirka iyo jirdhiska. Dianabol loogu talagalay jidh-dhisidda waxa loo baahan yahay in la qaato qiyaasta saxda ah si loo gaaro faa'iidooyinka ugu badan. Dhismayaashu waxay sidoo kale u baahan yihiin inay ku dhajiyaan wareeggooda qaabdhismeedka jirka ee Dianabol iyaga oo la-talin joogto ah ka helaya tababarayaashooda ama dhakhaatiirta.
Natiijooyinka Dianabol mar kasta waa mid aad u qibrad leh haddii daroogada si haboon loo isticmaalo. Waxa kale oo muhiim u ah wakhtiga qiyaasta Dianabol ee ku salaysan nolosha Dianabol nuska. Tani waxay hubisaa isticmaalka wanaagsan ee daroogada ee jirka.
Dadka doonaya inay iibsadaan Dianabol waa inay sidoo kale ka warqabaan fursadaha laga heli karo suuqa inta aysan iibsan. Doorashooyinkan waxaa ka mid ah darajada Pharmaceutical Dianabol, UGL iyo sidoo kale ilaha internetka. Qabashada cilmi baaris wanaagsan iyo akhrinta macaamiisha Dianabol; Dib u eegista ayaa sidoo kale muhiim ah ka hor intaadan iibsan Dianabol iibka.
Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, waxaad hubaal ka dhigan tahay inaad ka soo baxday Dianabol ugu fiican ee jirka loogu talagalay jirka.
Taylor N. William, MD Anabolic Steroids iyo Athlete, 2d ed, (2002); p.117Gerber Larry; Xaqiiqda ku saabsan Steroids, (2013) p.13
Frattasio Adam; Nin Steroid ah: Qirashooyinka Awood-kororsiiyaha ee ka yimid Da'da Dhimirka ee Horumarinta (2016). p.36, p.67, p.82, p.99
Shannon Knudsen; Kor u kaca, (2016) p.35
Shirkadda Carl Carl; Gym Candy (2008) p.146, p.157.
Thomas John A ;; Daroogooyinka, Madadaalada, iyo Waxqabadka Jirka (2012), p.98.
Denera Tony; Ku biirida Arnold: Kacsanaanta Girlie Man (2012),